Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay cambaareyntii Imaaraadka Carabta – Madal Furan
Hoy > Warka > Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay cambaareyntii Imaaraadka Carabta
Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay cambaareyntii Imaaraadka Carabta
Muqdisho (Madal Furan) – Wararka laga helayo magaaladda Muqdisho ayaa sheegaya in Wasaaradda Arrimaha dibadda ee soomaaliya ay ka jawaabtay eedeyn iyo cambaareyn ay dowladda Imaaraadka Carabtu ay u jeediyeen Soomaaliya.
Cambaareynta ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in ciidamada amnigu ee Soomaalidu ay u adeegsadeen hub gudaha diyaaradda isla markaasna ay kula wareegeen lacag dhan $9.6 Milyan, waxayna ku tilmaantay falkaas inuu ahaa mid sharci-darro ah oo xadgudub ku ah shuruucda caalamka.
Haddaba, wararka horudhaca ah ee ka imaanaya Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay durba ka jawaabtay eedeyntaas oo ay sheegeen in lacagtaas lagu soo qaaday boorsooyin aan aheyn kuwa Dublomaasiyiintu lagu yaqaan, taasoo ay sheegeen inay ka hor imaaneyso xiriirka dublomaasiyadeed ee cahdigii Vienna.
Baarlamaanka Soomaaliya oo heshiisyo caalami ah anisixiyey.
Al-Shabaab oo qarxiyay buundo muhiim u aheyd Shabeelada Hoose
SAWIRO:-Sheekh Cabdiweli Cilmi Yare iyo dad badan oo kale oo Gaalkacayo lagu laayay